Semalt Deskundige: 8 SEO Fouten ho an'ny fahasalamana ho an'ny Marketing
Zoekmachines manampy anao hitady ny mpanjifa vaovao, mpamaky sy mpihira, fa ny ankamaroan'ny zava-manahirana dia tsy manakana anao hiditra ao amin'ny lisitry ny mpikaroka.
Ny môtera dia afaka manambara fa ny zava-drehetra dia tsy misy afa-tsy ny fahatsapana fa diso ny fiheverana ny zo sy ny fitaovam-pandraharahana.
Tsy maintsy atao ny manaraka ny fahadisoana diso, voatondro amin'i Lisa Mitchell, ny Customer Success Manager Manager van Semalt Digital Services, mba hahazoana tombontsoa manokana ho an'ny mahaliana indrindra.
Miantsoroka anao fa ny vahaolana dia tokony hanaraka ny fikarohana amin'ny fomba samihafa. Google verkiest uitgebreide inhoud, satria ny zava-drehetra dia mitady ireo zava-dehibe izay mameno ny azy. Ny vola miditra dia ampiasaina amin'ny fiteny 2400 mba hilazana fa ny fifanarahana dia ny fampiasana ny hevitra tsara momba ny atidoha.
2. Fomba fijerin'ny mpanafika
Ny tranonkala Stale dia nanakorontana ny vaovao farany amin'ny vaovao amin'ny alàlan'ny tranonkalan'ny tranonkala, izay manam-pahaizana manokana. Ny pejy tsy misy dikany dia tsy azo ampiasaina amin'ny mpampiasa sy Google izay tsy misy fifanatonana.
Ireo singa izay nosoratana mba handika an-tsoratra, hahatonga ireo mpamita bebe kokoa hijanona amin'ny pejy, amin'ny alalàn'ny Google izay miteraka fihenjan-jaza
3..Speldouten ny inhoudsfouten
Na dia eo aza ny tsy fisian'ny fandaharam-potoana, tsy misy ny SEO, dia ampifandraisina amin'ny fiheveranao ny fiheverana ny fiheverana sy ny fametrahana azy.
4. Firaisana ara-nofo
Tena zava-dehibe ny mitadidy foana ny toro-hevitra ho an'ny besinimaro satria ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manana ny lanjany manokana. Ny fizarana ny lahatsoratra amin'ny fampiasana ny fampiharana ny fampisehoana, ny sary ary ny lohahevitra, dia milaza fa ny fandinihina ny toro-hevitra dia mamaritra ary manamora ny fiheverana fa misy ny fanamarihana ao amin'ny pejy.
5. Mampiasà lahatsoratra lava indrindra
Ny fiteny rehetra dia ampiasaina ary hahafantarana ny mpamaky ny pejy. Ampiasao ireo fepetra ireo, raha toa ka misy fiantraikany amin'ny fampiasana ny fiheverana ny mpampiasa.
6. Fifandraisana misy eo amin'ny rohy
Ny fahatsaram-piainana ara-pahalalahana izay ampiasaina amin'ny fampiasana ny rohy sy ny fitaovana, dia zava-dehibe ho an'ny mpamaky. Ny Google dia maneho ny fahatsapana ho marina sy ny SEO-fanandramana mifototra amin'ny rohy izay misy ny rohy avy amin'ny tranonkalan'ny mpitsidika
7. Affichage de promosie
Ny firafitry ny fitaovana nampidirina ao an-tokantranonao dia tsy voatery hampihorohoro ny isa 1. Tokony hanam-paharetana ianao ary miandry ny olona mba hanomezana porofo anao ny SEO-endri-tsoratra, toy ny sehatra sosialy sy ny rohy.
8. Afindra amin'ny CTA's optimalisatie
Ny fametrahana ny rafitra fanaraha-maso ho an'ny fametrahana ny safidim-bahoaka sy ny anaram-boninahitra an-tsoratra dia ny SEO-diso izay mety ho azo antoka fa ny fanapahan-kevitra sy ny fanamafisana ny didim-pitsarana.
Noho ny tsy fahampian'ny vidin'ny SEO, dia tsy tokony hohadinoina ny fiheverana fa ny votoatin'ny fifanarahana dia ny fampiasana finday. Ary tsy ho voatery hianjera ilay mpanafika eo amin'ny pejy Source .